Soomaalida Lagu Laayay Yaman Oo Aas Wadareed Loo Samaynayo | puntlandi.com
Soomaalida Lagu Laayay Yaman Oo Aas Wadareed Loo Samaynayo
Soomaalidii lagu laayay dalka Yaman ayaa ugu dambayn go’aan lagu gaaray in la Aaso, ka dib markii Xuutiyiinta dalka Yaman ay Talaagado galiyeen, ayna sheegen inaysan aaseen illaa laga helayo ehelada dadka.
In ka badan bil ayay ku jireen Talaagado, waxaana Weerarkii lagu laayay uu dhacay 17 March, 2017, wuxuuna ahaa fal ay aad uga Argagaxeen Ummadda Soomaaliyeed.
Weerarka ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 33 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 70 qof, waxaana jiray dad ka badbaaday Weerarka oo aysan wax dhibaato ah gaarin.
Waxaa ugu dambayn ay dawlada Soomaaliya iyo Xuutiyiinta Yaman ayaa isku raacay in Maydadka la aaso, waxaana ehelada dadka dhintay ay Warbaahinta horay uga sheegen inay ka samreen Carruurtooda, waxayna codsadeen in la aaso.
Yaman ayaa waxaa dhinaca kale ku sugan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira Wiilal iyo Gabdho, kuwaas oo doonaya inay ka Tahriibaan, waxaana dadka Yaman ku sugan ay qaarkood joogeen in ka badan saddex bilood.
Qaar ka mid ah Tahriibayaasha Soomaalida ayaa Kooxaha wax Tahriibiya ay bilaabeen inay ka qaadaan Madax furasho, arrintaas oo aan horay uga jirin Yaman.
Waxaa xusid mudan inay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo Madax furasho loogu haysto dalka Liibiya, kuwaas oo lagu xujeeyay in lagu sii daynayo lacag ka badan Todoba Kun Oo Doolar($7,000).
Si kastaba ha ahate, arrintan ayaa kuso beegmaysa xilli la la’ yahay Dooni maalmo ka hor ka baxday dalka Liibiya oo ay saarnaayeen dhalinyaro Soomalaiyeed meel ay ku dambaysay.